प्रियंका कार्कीको नजरमा पढ्नै पर्ने तीन पुस्तक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
प्रियंका कार्कीको नजरमा पढ्नै पर्ने तीन पुस्तक
मेरो लाइफस्टाइल ||3April, 2021
यदि तपाईं शनिवार फुर्सदिलो हुनुहुन्छ भने पुस्तक पढेर पनि समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर यो खाली समयमा कस्तो पुस्तक पढेर सदुपयोग गर्ने त ? वा कस्ता पुस्तक छान्दा राम्रो हुन्छ ? भन्ने किसिमको द्विविधामा हुनुहुन्छ भने, तपाईँले यी तीन पुस्तक पढेर बिदाको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
यी हुन् अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको नजरमा पढ्नैपर्ने तीन पुस्तक
१. द सेक्रेट
मैले प्रायजसो सेल्फ हेल्प पुस्तकहरू पढ्ने गरेको छु । मैले कुनै तीन पुस्तक छान्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा द सेक्रेटलाई लिन्छु । यो मैले पढेको पहिलो सेल्फ हेल्प पुस्तक हो । यो पुस्तक एकदमै प्रेरणदायी र पढ्दै जाँदा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न गराउने किसिमको भएकोले पनि यो पुस्तक एक पटक त पढ्नै पर्छ ।
सेपियन्स किताव भने मैले भर्खरै पढेको किताब मध्येको एक हो । यो एकदमै ज्ञानवर्धक पुस्तक हो । मानिसजातिको संक्षिप्त इतिहास नै रहेको यस किताबमा सम्पूर्ण कुराहरू सहज र विस्तृत रूपमा रहेको छ ।
३. मेन आर फ्रम मार्स, वुमे आर फ्रम भेनस
यो पुस्तक सम्बन्धमा सञ्चार सुधार गर्न, तपाईं आफ्नो सम्बन्धमा के चाहनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन र तपाईं कसरी आफ्नो सम्बन्धमा चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि एक व्यावहारिक गाइड नै हो । त्यसैले यो पुस्तक पनि पढ्नै पर्ने किताब मध्येको एक हो ।